Xaaf: Qoor-Qoor wuxuu ahaa Dubihii la ii'adeegsan jiray | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa sheegay in saddexdii sano ee xafiiska uu joogay labo sano oo kamid ah uu diyaarad ku dulmari jiray Cadaado.
MUQDISHO, Soomaaliya - Axmed Ducaalle Geelle [Xaaf], Madaxweynihii hore ee Galmudug, ayaa Maanta afka furtay, isagoo eedeymo kulul u jeediyay Madaxweyne Qoor-Qoof oo uu sheegay inuu ahaa qofkii ka shaqeyn waayay maamulkiisa.
Isagoo ka hadlay munaasabad ka dhacday Muqdisho maanta, ayaa Xaaf ku sheegay in Qoor-Qoof uu noqday dubihii loo adeegsan jiray intii uu xafiiska joogay, iyadoo loo diiday maamulkii uu hogaaminayo inuu ka shaqeeyo Cadaado.
"Saddexdii sano ee aan meesha joogay, dubihii la ii adeegsaday ayuu ahaa Qoor-Qoor, oo la ila dhacayay, isaga iyo ragga uu wataba," ayuu yiri Xaaf, oo hadda u sharaxan Xildhibaanimo.
Wuxuu kaloo ku eedeeyay Qoor-Qoor in askar daacad u ah ay dileen ilaaladiisa, islamarkaana is hortaag lagu sameyn jiray marka uu damco inuu booqdo magaaladda Cadaado, oo laga diidanaa maamulka Xaaf.
"In aan aniga labo sano diyaarad ku kormaro Cadaado, oo Qoor-Qoorna maalintii la doortay hor ka tagay, illaa maantana la qaabilayo Saleebaan jawaabteeda waa laga rabaa, Cabdalla iyo Sacad-na waa inay arintaas istaagaan, hadii kale waxay noqonaysaa in waxkasta oo xun in la sameeyo, oo haddana la isaga daba-tagin," ayuu yiri Xaaf.
Xaaf oo hadalka sii wata ayaa xusay in Qoor-Qoor uu wax badan la qabtay markii la doortay, oo ay kamid tahay inuu xilka ku wareejiyay, kana codsaday beelaha Galmudug inay la shaqeeyaan, balse uusan isaga u abaalgudin, islamarkaana taas bedelkeeda hadda isku dayayo inuu ka hor istaago kursiga Xildhibaanimo ee uu raadinayo.
Xiligii Xaaf uu xukunka haystay, Qoor-Qoor wuxuu ahaa Wasiir dowle katirsan Xukuumaddi Khayre, waxayna Villa Somalia u adeegsan jirtay inay ku burburiyaan maamulkiisa, maadaama uu siyaasad ahaan kasoo horjeeday Farmaajo.